Indlela ukunquma iphesenti fat umzimba? Ifomula ka isisindo ekahle
Uma nomsubathi noma nje umuntu engakuphazamisi isimo sakhe sempilo, cishe babezibuza ukuthi ukunquma iphesenti fat umzimba. Kunezindlela eziningana ukwenza lokhu. Ngamunye wabo uhlukile ngokuya eyinkimbinkimbi. wokubala Fat, okuyinto olunikezwa abasebenzisi abaningi Inthanethi, ngokuvamile olungalungile, ngakho sicabanga ifomula lesifanele kakhulu futhi ezinye izindlela ungakwazi ukulawula isisindo sakho. Kuze kube manje, asungula izindlela eziningi ezintsha ukuthi ukuba uthole imiphumela olunembile kakhulu, kodwa zonke zidinga ukutshalwa kwezimali. Khetha ngendlela efaneleke kakhulu ukuba baqhubeke beqondiswa nguye.
Kungani ukubala inani amafutha emzimbeni
Ngaso sonke isikhathi uma ushiya kulesi silinganiso, uzophawula umkhuba eziqondile. Wena noma ngcono, noma ulahlekelwe isisindo, siqala kancane. Kodwa ngaso sonke isikhathi Kilos ukuthi ukulahla kukhona ungqimba okunamafutha. Lokhu kungase kube mass imisipha noma ukuphelelwa amanzi emzimbeni banal. Uma ufuna ukulahlekelwa noma ukuzuza isisindo, kufanele uzibuze amafutha ncamashi ongama. Ngaphezu kwalokho, le formula of isisindo ekahle kuyinto esinembile uma wazi kangakanani lwamafutha engeziwe emzimbeni wakho. Ngakho-ke, ukwazi izinga udinga qiniseka, futhi namuhla sizobe ukukhuluma kanjani lokhu.
Izindlela eziningi ezilula anqume inani fat umzimba
Isisindo ngenxa yokuphakama kanye nobudala kunqunywa isekelwe inani yamafutha amaningi emzimbeni. Kungaba okukhulu, kodwa kuyoba kuphela imisipha, amanzi kanye nethambo. Cabanga indlela ukunquma iphesenti fat emzimbeni:
izikali Special, enquma inani lemali fat emzimbeni. Nguwe kuphela ongathatha isinqumo noma ukuthi ungayethembi kokusungulwa abantu, ngoba asikwazi ngokunembile ukuqinisekisa ukuthi ulwazi uthola kweqiniso.
Ungakwazi ngokucophelela akazihlolisise esibukweni anqume inani fat ngokweqile. Kodwa kunzima ngomqondo ovulekile uzihlole, ngakho le ndlela akuvami olunembile.
Sebenzisa tape isilinganiso okhalweni ingalo. Uma amasentimitha okhalweni isibe ezincane, futhi isandla - ngaphezulu ke ziye zanciphisa fat umzimba futhi yemisipha iyakhula.
Noma yimuphi yalezi zindlela kufinyeleleke kuwo wonke umuntu, kodwa ngosizo lwabo ungayitholi Imiphumela ngqo. Ngaphezu kwalokho, ukuhlola isimo jikelele we fat umzimba, izinombolo ezithile uthola.
Ifomula ka isisindo ekahle
Ukuze uthole ukuthi iphesenti fat indlela Layla Makdonalda, udinga ukubala BMI yakho. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa ifomula: BMI = isisindo e amakhilogremu / ukuphakama ngamamitha yisikwele. Okulandelayo, thola isithombe sakho:
BMI = 13-20. Khona-ke iphesenti fat ilingana 13,5-24;
BMI = 21-30. Amaphesenti fat 25,5-39;
BMI = 31-40. Amaphesenti fat 40,5-54.
Le ndlela yokunquma ukushuba we amanoni zithandwa emantombazaneni, kodwa kunezinye izindlela ukubala lesi sibalo ngokunembe kakhudlwana.
Indlela ephumelela kunazo ukunquma inani fat umzimba
Uma unesithakazelo indlela ukunquma iphesenti fat umzimba, besebenzisa imishini kwezokwelapha, kufanele ukuhlola amathuba sakho sezimali. Ngisho ezikhungweni zomphakathi, le ndlela idinga outlay imali, kodwa inembe kakhulu kunazo zonke bonke. It is esetshenziswa abadlali professional phambi mncintiswano, uma sidingeka ukunikeza ulwazi olusemthethweni mayelana nesimo umzimba.
Ingqikithi indlela simiswe ngalendlela lelandzelako: ngesikhathi izihlakala namaqakala electrode ekhethekile awashintsheki lapho ababuthaka kagesi. kwezicubu zomzimba umelana naye, kanye nezinga Ukumelana kukalwa amadivaysi ezokwelapha. Uyazi Chile ngokushesha ngemva kokuhlinzwa.
Kodwa le ndlela has ethile ebalulekile. Uma ngobugebengu ibhalansi amanzi, imishini ongabonisa Imiphumela okungavamile emzimbeni wakho. Ngakho-ke, le nqubo ngokuvamile eyenziwa kabili. Lapho umzimba zinyamalale edema, usule izinto zikagesi eziphezu ongabonisa iphesenti fat ingaphansi kwe ngesikhathi esidlule.
azihlole akudingeki kwenziwe ngaphandle isidingo noma isiqondiso okhethekile udokotela, kungcono ukusebenzisa ezinye izindlela ukubala inani yamafutha amaningi emzimbeni.
kwamanzi indlela enesisindo
ungakwazi ukunquma isisindo ekahle ukuphakama kanye nobudala kuphela kucatshangelwa inani amafutha emzimbeni. kwamanzi indlela enesisindo unika imiphumela olunembile kakhulu kuzo zonke izindlela eyaziwa njengamanje.
Ingqikithi yalo nesilinganiso kwamanzi simiswe ngalendlela lelandzelako: uma umuntu bacwiliswa ngokuphelele emanzini, usawoti isisindo kangangokuba waze waxoshwa uyisitsha itholakala. Emva inqubo umuntu ukukalwa ngesikali izikali yodokotela, kanye nochwepheshe ukuqhathanisa isisindo emanzini nge esisindo ezweni. Ngemva enifeza izibalo ezithile ibalwa inani amafutha emzimbeni.
Ukusebenzisa caliper kwabesifazane
Ukuze ubone Iphesenti of fat umtimba (evamile ngabesifazane ukuba kuhlonishwe ngokucophelela, njengoba kuthinta kakhulu izinkomba zezempilo jikelele), sebenzisa calipers. Leli thuluzi lomculo, elinganisa ukushuba fat umzimba ku zonke izingxenye zomzimba.
Ngakho, indlela ukunquma iphesenti fat umzimba ngosizo we calliper:
Funda ukushuba esibayeni fat ngemuva ehlombe;
Bala ukushuba we ohlangothini folds phakathi ithambo ethangeni kanye izimbambo;
Kala ukushuba emphethweni ku esiswini, kancane esebohlile kusukela inkaba;
Sebenzisa ifomula: (isamba emphethweni amathathu cm + isibalo esifanayo esigcawini + 0.03661 * inani leminyaka yakho) + 4.03653.
Kudingeka uprakthize ukuze ngokuzimela ukubala iphesenti fat umzimba. Izinga kwabesifazane - ekubalweni imiphumela olunembile izikhathi 3. ungakwazi ukubala inani fat umzimba futhi amadoda nale divayisi.
Ukusebenzisa caliper kwabesifazane labesilisa
Calculator namafutha, okuyizinto aboniswe ngezansi, kodwa linembile lapho likhuluma ngokwanele, kodwa ukuthola imiphumela ezinokwethenjelwa Kudingeka uprakthize usebenzisa ithuluzi. Ngakho, ukuze uthole ukuthi Inkomba yakho, landela lezi zinyathelo:
Funda ukujiya nesibaya ngemuva ehlombe.
Kala ukujiya emphecweni amafutha maphambili ehlombe.
Bala ukushuba we emphethweni amafutha ngemuva nesisu.
Uma uhlanganisa zonke lezi izibalo etholwe.
Ukuze uthole ukuthi inani amafutha emzimbeni wesilisa, sebenzisa idatha elandelayo:
iminyaka engu-50 nokuningi
Ukuze uthole okuqukethwe amafutha emzimbeni wowesifazane, amatafula ezilandelayo:
Le ndlela yenza kube lula ukwazi izibalo ngqo. Ngaphezu kwalokho, uma kungukuqonda, kulula ukuyisebenzisa. I ethile ukuthi ngezinye izikhathi kunzima ukwenza izilinganiso ngokwabo, bedinga usizo lomunye umuntu.
Kungakanani Amaphesenti fat kumelwe abe emzimbeni
Umzimba womuntu - is a indlela eyinkimbinkimbi kakhulu. okuqukethwe Isilinganiso amafutha kuwo abantu abavamile futhi lo msubathi lihlukile. 10% abesifazane 3% amadoda - isilinganiso kunesidingo. Amaphesenti eliphansi fat umzimba kusikisela ukuthi Kuyaphuthuma ukuba mkhulu noma ungase ube nenkinga yezempilo.
Kufika 31% fat umzimba kwabesifazane-25% fat umzimba ngoba amadoda - sibalo evamile. Uma izibalo zakho uyeqe, udinga ukudla ekhethekile kanye nokusebenzisa ukunciphisa amafutha emzimbeni. Ukushesha uqale silwe isisindo okweqile, isikhathi ngaphezulu umzimba wakho kuyoba kulesetayelekile zonke izinqubo umzimba.
Ngakho, umuntu kudingeka azi iphesenti fat emzimbeni ukulawula isisindo futhi kuvimbele izinkinga zempilo ezihlobene yokuntuleka noma isisindo okweqile.
Yikuphi indlela yokulinganisa le nkomba ukukhetha - unquma. Kodwa musa ukunganakwa ngisho izindlela eziningi ezilula okungenani cishe uyazi ukuthi kungakanani yakho fat umzimba akuyona into engavamile. Khumbula ukuthi ngo-ubuningi bayo incike ukubukeka hhayi kuphela yakho, kodwa futhi nempilo.
Izifo "isihlahla-indoda": umlando, izimbangela kanye namaqiniso ezokwelapha
Ukuthini ivolumu corpuscular lehla: Izimbangela
Izilinganiso Orsoten ukuphuza noma ukungaphuzi baphuze.
Kuphi futhi kanjani ukuthola i-pulse kahle? Heart Rate Ukumeda e abantu
Lumbar nomgogodla osteochondrosis
Ukuba enempilo kufanele kube wonke umuntu!
Kungani ukhethe ethinyl estradiol? Kuyini lokhu ama-hormone?
Indlela ukupheka ushizi ikhekhe kuhhavini: zokupheka ngezithombe
Golovngo umdlavuza ubuchopho
Kazi uyaphupha kitten Redhead?
Yini wenze igobolondo HP iphrinta ukusebenza like entsha?
Ukukhetha esihlalweni isondo
Zokubelethisa College, Petersburg ikheli, ikhethelo, ukubuyekezwa
Kanjani ukuze kuvuleke "Imininingwane"
Umlando baseball. Kanjani ukuze ufunde ukushaya nelulwane
Krasnodar esifundeni: olunesihlabathi, ulwandle afudumele, ngemisebenzi emihle
Morgan: Umhlahlandlela, inhlangano, Runes, emathalenta ukuziphatha emgqeni